Umthandazo wokuba anditsalele umnxeba aze andicele uxolelo. ? Kwimizuzu eli-10
Umthandazo wokundibiza kwaye ubuze kum uxolelo ayisosenzo sokuzingca, njengokuba abantu abaninzi bezibona nje.
Kuyinto, endaweni yoko, isenzo senkululeko kunye nonyango lwangaphakathi.
Ngamanye amaxesha sinabantu ebomini bethu abasoloko besenzakalisa kodwa ngenxa yesizathu esithile kwaye, ngendlela engaqhelekanga, sinokubonakala nje.
Nangona kunjalo, loo mntu ugqibela ngokushiya inqwaba yethu yamanxeba engekapholi kwaye ukuba nje ayisiyinyanga siyakubotshwa ingonaphakade kuba iya kuba linqanaba lobomi bethu elingakahlulwa.
Kungenxa yesi sizathu le nto lo mthandazo ubalulekile, umnxeba apho uxolelo luyi-protagonist iphilisa amanxeba kwangoko kwaye, ngaphandle kwamathandabuzo, siya kuba silungele ukuqala ngaphezulu.
Ukuqala ubomi obutsha ungakhange ugqibe ukuvala imijikelezo kufana nokuzama ukwakha isakhiwo kumabhodlo kwenye into engakhange imelane noqhwithela kuba kungekudala, isakhiwo esitsha siza kuthi siwe ngoku. Akukho mthandazo onyanisekileyo owenziwe ngokucinga ngokuzingca.
1 Ngaba umthandazo wokuba unditsalele umnxeba ucele uxolelo uhlala usebenza?
1.1 Umthandazo wokunditsalela umnxeba kwimizuzu eli-10.
1.2 Umthandazo wokuba undijonge kwimizuzu eli-10 kwaye ucele uxolo
1.3 Umthandazo wokuphelelwa lithemba ukuze unditsalele umnxeba
1.4 Ndithandaze kuSan Antonio ukuba anditsalele umnxeba
Ngaba umthandazo wokuba unditsalele umnxeba ucele uxolelo uhlala usebenza?
Imithandazo okhankanywe kweli nqaku uhlala usebenza. Kufuneka nje uthandaze ngokholo.
Siza kubonisa ama-4 awahlukeneyo kwiingcwele ezahlukeneyo. Ungabathandazela bonke ngala mhla, ukuze ufumane amandla angaphezulu.
Ukuba ufuna ukuphelisa ukubandezeleka kwakho, kufuneka uqale ngoku ukuthandaza. Uncedo lukaThixo kuphela oluya kundenza ndikubize ngokukhawuleza.
Sukuchitha ixesha elingakumbi, ukhupha izivakalisi ezingezantsi!
Umthandazo wokunditsalela umnxeba kwimizuzu eli-10.
Nkosi, ndingumkhonzi othembekileyo, ocela uncedo, ndicela ukuba umnike umnxeba onokubaluleka, onokuchaza izinto ezininzi.
Ndifuna loo mnxeba kwaye ulungile, kwaye uzisa iindaba ezimnandi San expedito.
Wena, sithandwa sam, khokhela umntu ukuba enze isigqibo esilungileyo.
Imizuzu elishumi inokuba lixesha lokuba loo mntu eze kuthi, kodwa khumbula ukuba umthandazo unokwenza yonke into.
Ngamatyala anzima ngakumbi emva koko amanyathelo afanelekileyo ngakumbi anokusetyenziswa. Umthandazo wobizo kwimizuzu elishumi usebenza kwiimeko zongxamiseko oluyinyani, apho kungekho nto ingaphezulu enokubakho umntu kwaye kufuneka sibeke lonke ukholo lwethu kumthandazo wokuba, kufanele ukuba uqatshelwe, unamandla.
Siyazi ukuba inyaniso ihlala iphambili kwaye kwesi sivakalisi iyafana. Inokwenziwa nangaliphi na ixesha kwaye kufuneka lubonakalise ukholo kuphela kwaye isidingo esinaso xa sithandaza.
Umthandazo wokuba undijonge ngemizuzu eli-10 kwaye ndicela undixolele
Owu, Sithandwa waseCyprian othandekayo, ngokulunga kwakho nangobuninzi bakho kwiintsikelelo ezikucelayo, ndiyakucela ukuba undenzele ububele, owaseZulwini, vumela loo nto ndiyithandileyo, ukuba indifune ngomphefumlo kunye nomzimba, kuba ndifuna ukomelela kwakhe. uthando, inkanuko yakho kunye nenkampani, owu, San Cipriano, onamandla!
Kwangathi isicelo singafikelela ekunyaniseni okungcwele, Ndidinga ukuba undinike umangaliso ofuna kum ulangazelelo lwakho nothando lwakho olugqibeleleyo ...
Owu, Nkosi, khawuye (utsho igama lakhe) undijonge xa ​​ephakama ebhedini yakhe kwaye uyokulala kwakhona ... kuba yeyam!
Ukuba uyandikhumbula, ukuba akanakubenza ubomi bakhe ngaphandle kobomi bam ... oh, umxhasi wababekekileyo othembekileyo esimthandayo nesicelayo kwakhona ... yenza into endiyithandayo, abuyele kwimikhwa yakhe aze andijonge, ubhala ngokundinika kwakhe ecaleni kwaye iinyawo zakhe zisiwa naye esihlalweni, apho andifumana khona ...
Owu, mmangaliso wemiphefumlo evala kwizililo, ndinike ubomi, ndinike ukuzola kwaye undinike yonke into endixelela yona, ukuba ukubuya kwesithandwa sam kukusondele kakhulu ...
Benemerito San Cipriano, ngamana intsikelelo yakho ize kum kunye nayo, umangaliso endikulangazelelayo, Bawo ...
Utata oyiNgcwele! Amen
Lo mthandazo unamandla amakhulu kwaye kufuneka wenziwe kuwo Izihlandlo zongxamiseko lokwenyani Asinakuzingca kwaye sibuze ngaphandle kokucinga ngomnye umntu.
Ukuzola kwentliziyo kuxhomekeka komnye umntu, kodwa ukuba sijonga kakuhle ngaphakathi kweentliziyo zethu, kunokwenzeka ukuba sizakufumana ukuzola kunye nethemba lokuthatha ixesha kwaye sikwazi ukuphakamisa umthandazo okhethekileyo kuye ophakamileyo.
Ngumthandazo ukunditsalela umnxeba ndicele uxolelo olungenziwa ukuba kusekho isidingo sokudibana nomntu okhethekileyo.
Ingangumntwana, iqabane elalikade lihamba nalo, ilungu losapho okanye umhlobo othile esingambonanga ixesha elide kwaye esele sifuna olo nxibelelwano ngqo sinokubakho kuphela xa ujongene naloo mntu.
Umthandazo wokuphelelwa lithemba ukuze unditsalele umnxeba
Bawo othandekayo, ndiyoyika ukwaliwa… Ndicela undibize (IGAMA LOMNTU) Nditsalele umnxeba undixelele ukuba uyandiva, uchaze zonke iimvakalelo zakho.
Kwaye ke ndingavuya ukuba ndingaphindi. Ndinike amandla okujongana nayo ngaphandle kwentlungu, ndiyazi ukuba kwicala lakho ndingakohlula kwaye ndinyamezele konke okuzayo. Ungaze undiyeke Bawo, ecaleni kwakho ndinamandla
Xa sisoloko sinomntu engqondweni, asinakukuphepha ukufuna ukwazi ngaye ngalo lonke ixesha kuba isidingo sinamandla kwaye sifuna ukunxibelelana kodwa asinakho ukuma de sigoduke, umnxeba ubonakala ungowona khetho ulungileyo.
Yiyo kanye le njongo umthandazo wokuphelelwa lithemba. Ibizwa ngokuba kuba sele isisixhobo sokugqibela esiya kuthi sisebenzise kwaye sisebenza kwaye sinamandla amakhulu eepesenti.
Imithandazo iyodwa idlulisela amandla amnandi kwaye ukuba lo mthandazo siwuphakamisela phezulu ngokholo olukhulu iziphumo ziya kumangalisa.
Emlonyeni wethu sinamandla amakhulu kakhulu, ngawo sinokwakha okanye sibatshabalalise. Kungenxa yoko le nto lo mthandazo kufuneka wenziwe ngokunyaniseka kwaye uxanduva olupheleleyo lwento esiyenzayo.
Ngalo lonke ixesha siqikelela abanye njengabongamileyo kunathi, njengoko ilizwi LikaThixo lisitsho.
Ndithandaze kuSan Antonio ukuba anditsalele umnxeba
San Antonio Namhlanje ndiza kuwe kuba ndifuna uncedo lwakho ...
Ndifuna (IGAMA LOMNTU) ukuba anditsalele umnxeba ndizimisele ukumxelela indlela endiziva ngayo kodwa kuphela ukuba uyafowuna.
Ndiyoyika ukuba ndingalahlwa kodwa ndifuna ukwazi.Wena kuphela onokwazi ukundinceda ngalo mbandela iSan Antonio ndifuna ukujongana nalo mzuzu kuba ndifuna ukwazi ukuba ndiyabuyiselwa na kwaye ukuba andinguye ndizokwazi ukubheka iihorizons ezintsha ...
Eli fowuni lithetha lukhulu kum.Yiyo loo nto ndiyifunayo kufuneka yenzeke ngokukhawuleza.Ndisoyika kodwa ndiyazi ukuba ndingayifumana.
Ukucela umnxeba kuyindalo.
Zinokubakho iinjongo ezininzi ezinokuthi lo mnxeba ube, umzekelo unokuba ufezekisa uxolelo oluyimfuneko ukuze ukwazi ukuqhubela phambili, ukumane wazi ukuba unjani omnye umntu lowo, ukuhambisa into yokuba uhlala ekho ngalo lonke ixesha, ngamafutshane, kwizinto ezininzi.
Into emangazayo kukuba isicelo sihlala sinjalo: ndifowunele.
Ukuba kunjalo, buza nje, ilula. Ngaphandle kwentloni okanye uloyiko kodwa kunye icacile kwaye iyinyani ofumana olo nxibelelwano silulangazelela kakhulu.
Onke anamandla amakhulu kwaye ukuba athandazelwe wonke umntu omnye uya kuba namandla amaninzi.
Rhoqo thandaza ngokholo umthandazo wokundibiza ngemizuzu eli-10 kwaye wonwabe kakhulu eluthandweni!
Imithandazo eya kwi-Saintyprian yaseCyprian